ဆုံမှတ်နိုင်ငံမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အထူးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖြင့် ပြန်လည်သွားရောက်လိုသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖြည့်စွက်ရမည့်ပုံစံ
ကျွန်တော်/ ကျွန်မသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာဆုံမှတ်နိုင်ငံမှတစ်ဆင့် အထူးလေယာဉ် (Relief Flight) အစီအစဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရန်ဆန္ဒရှိပါသည်။ ကျွန်တော်/ ကျွန်မအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပါက Community Based Facility Quarantine တွင် (၁၄) ရက်နှင့် Home Quarantine (၇) ရက် နေထိုင်ရန် လိုအပ်မည်ဆိုသည့်အချက်ကိုလည်း သိရှိလိုက်နာမည်ဖြစ်ပါသည်။
I hereby declare that I have arrived in the United States and I wish to return to Myanmar with the Relief Flight program via the focal destination country. I acknowledge that I will be required to stay in the mandatory community based facility quarantine for (14) days and home quarantine for (7) days upon arrival in Myanmar.
**** ဤပုံစံနှင့်အတူ လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (ဓာတ်ပုံပါစာမျက်နှာ)၊ အမေရိကန် ပြည်ဝင်ဗီဇာ၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရရှိထားသူဖြစ်ပါက Green Card ၊ ဆိုက်ရောက်ပြည်ဝင်ဗီဇာ ၊ endorsement ပါရှိသည့် စာမျက်နှာတို့ကို ပူးတွဲပေးပို့ရပါမည်။
**** Please make sure to submit scanned copies of >>>> (1) Passport photo page (2) US visa (3) Arrival stamp (Immigration) (4) Green card copy if applicable.
Once you have all the information ready, please click here for online application form.
The online form best works with desktop PC or laptops.